Zvidzidzo Zvishanu Zvakadzidzwa Kubva Kupfuura Mamirioni makumi matatu Mumwe-kune-Mumwe Kudyidzana kweMutengi muna 5 | Martech Zone
Muna 2015, mubatsiri wangu neni takatanga kushandura nzira iyo vatengesi vanovaka hukama nevatengi vavo. Sei? Hukama pakati pevatengi nedhijitari midhiya yakanga yachinja, asi kushambadzira kwakanga kusati kwaitika nazvo.
Ndakaona kuti paive nedambudziko hombe-ku-ruzha, uye kunze kwekunge mabhureki ari hyper-relevant, vaisakwanisa kuwana chiratidzo chavo chekushambadzira chakasimba kuti chinzwike pamusoro peiyo static. Ndakaona zvakare kuti kusviba kushamwaridzana kwave kukwira, uko midhiya yedhijitari uye mabhureki aingoerekana aona kufambiswa kwetraffic-kutyaira, asi akatadza kuronda kwaibva.
Chii chakaitwa pamusoro peiyo static uye kubata kutarisisa kwemutengi? Kutumira meseji. Wese munhu anotumira mameseji mazuva ese, asi mhando dzaive dzichifuratira iyo chiteshi - kukuvakuvadza. Taida kubatsira ma brand kubata pfungwa dzevateereri vavo nenzira itsva, saka takatangisa Spectrm senzira yekuita otomatiki imwe-kune-imwe yemukati kuburitsa kuburikidza nekutumira mameseji pamaapps apo vanhu vanopedza nguva yavo, uye kuwana mabhureki achitaura. ne vatengi, kwete at ivo. Takakurumidza kuona kuti iyi yaive nzira yekushambadzira isina kubatwa yakagadzirisa ese aya matambudziko evatengi pamhepo.
Makore mashanu gare gare, takadzidza zvakawanda pamusoro pekushambadzira kwekukurukurirana, uye muna 2021 chete, takagonesa anopfuura mamirioni makumi matatu kusangana kwevatengi kune vatengi vedu. Izvi ndizvo zvatakadzidza kubva mukubatsira vatengi kuvhura uye kuyera yavo yechat messaging zano, uye nekuita zvakanangana nevatengi kunogadzira iyo yakasarudzika ruzivo rwavanotsvaga.
Zvidzidzo Zvishanu Zvakadzidzwa zveKugadzirisa Otomatiki Meseji
Takadzidza zvakawanda kubva mukubatsira Fortune zana dhizaini dhizaini uye chiyero chekushambadzira chatbots izvo zvisingangosanganisire vatengi asi zvinoshandura kutengesa. Hedzino dzimwe dzenzira dzaunogona kugadzira yakabudirira otomatiki meseji zano, uye nei zvichikosha.
Chidzidzo 1: Tanga neChiredzo
Ndiwo mubvunzo mukuru kwazvo wemushambadzi: Ndinotora sei kutarisisa kwevateereri vangu, uye ndinobatanidza sei pachangu uye nekupa chimwe chinhu chinoita kuti vade kuita? Chekutanga, gadzira chirauro chinomanikidza chinorova pamarwadzo mapoinzi auri kugadzirisa uye nei vachifanira kuita nechatbot yako. Ndezvipi zvakakosha zvavachawana kubva pane zvakaitika? Tonga zvavanotarisira pamusoro pezvavachawana kubva muchiitiko. Zvadaro, shandisa yakananga mhinduro kopi inotungamira vatengi vako kuburikidza nekuchinjana kuita chiito.
Nei zvichikosha? Vateereri vako vaneta nekuedza kwekushambadzira kwedhijitari kwavanoona mazuva ese. Ivo havangodi chimwe chinhu chakasiyana asi vanozosarudza mhando dzinopa ruzivo runobatsira uye rwakakodzera. Yedu data inoratidza kuti zviitiko zvinotaurirana zvakananga kukosha kwechiitiko uye zvinotungamira vatengi munzira yerwendo nemhinduro dzakakurudzirwa zvine chekuita kwakasimba uye kutendeuka kuita.
Chidzidzo 2: Ipa Chatbot Yako Hunhu Hwakasimba
Vatengi vako vanogona kuona kana vari kudyidzana nebhoti inotsigirwa neiyo yakaipa tekinoroji inonamira kana ikabvunzwa mubvunzo "uri kunze kwescript." Izvo hazvina kukosha chete kuita kuti bot yako inakidze, asi kukwidziridza data rako rekukurukurirana kuti riite hungwaru uye ripindure. Ipa bot yako hunhu hunoenderana neizwi remhando yako, ita kuti ive yemunhu, uye shandisa emojis, mifananidzo, kana magif paunenge uchitaura.
Nei zvichikosha? Kunyangwe ivo vachiziva kuti vari kutaurirana nechatbot, vatengi vanoda kupindirana pamwero wega nemhando dzavanoda. Pavanotumira meseji neshamwari, kuseka, mifananidzo, .gifs, uye emojis zvese chikamu chekutaurirana uku. Yedu data inoratidzawo kuti mabhureki ane akasimba bot hunhu uye inodiwa yekugadzira chat ine kubatanidzwa kwakasimba.
Chidzidzo 3: Ona Zvaunotaura
Kudyidzana kwevatengi kunotorawo data rakawanda zvakare. Isa shanduko yekutevera uye kushuma pamwoyo wezano rako rekutaura, asi tora nzira yakazara yekupa iyo inova nechokwadi chekuti uri kuyera nemazvo maitiro eiyi chiteshi chitsva chekushambadzira.
Telekom vaive ne9x shanduko chiyero vs yavo webhusaiti traffic mishandirapamwe.
Pepuru ndawana 4x yekudzoka pane ad spend.
Nekushandisa mameseji emunhu, Ford yaive ne54% yekusimudza hama mukufunga uye 38% hama yekusimudza muchinangwa chekutenga - zvese zvakakwirira kupfuura bhenji reindasitiri yemotokari.
Nei zvichikosha? Shanduko kumitemo yekuvanzika uye makuki ari kudzikisira nzira iyo vatengesi vanogona kuteedzera madhijitari ekushambadzira kwavo. Kushambadzira kwekukurukurirana hakungope nzira yaunogona kuunganidza yakaziviswa data zvakananga kubva kune vatengi vako, inzvimbo yekubata inogona kuteverwa kuti ikubatsire kunzwisisa ROI yako yese. Zvakare, ruzivo rwedu nevatengi ndechekuti vakakwanisa kukwirisa zvese zvekutaurirana uye pa-saiti shanduko kuti vakwidze faniro yavo.
Chidzidzo 4: Gara Uripo
Nekuti vatengi havangori pamafoni avo panguva yebhizinesi rako, otomatiki-kune-mumwe meseji anogona kugara aripo kuti abatanidze vatengi chero nguva yezuva. Kutora an nguva dzose-mberi nzira yekushambadzira yekukurukurirana inoratidza vateereri vako kuti uripo kwavari.
Izvi zvinotsinhirwa nevakapindura mumushumo wedu we State of Social Conversational Commerce. Isu takaona kuti zvikonzero zviviri zvepamusoro zvekuti mumwe munhu ataure nemhando kuburikidza nekutumira mameseji app imhaka yekuti zviri nyore nekuti vanosvika pakusarudza nguva yekubatanidzwa, uye inokurumidza.
Asi kugara uripo hakusi kwekungosangana nezvinotarisirwa nevatengi. Ndezvekufunga zvinopfuura mishandirapamwe. Kuve neanogara-pakutaurirana ekushambadzira zano ndiyo chete nzira yekuramba uchiwedzera kukosha kwekutumira mameseji sechiteshi.
Nei zvichikosha? MaBrands anotora nzira dzenguva pfupi, dzakanangana nemishandirapamwe anogona kuona kudzoka, asi anozopedzisira arasikirwa nema brand anotora nzira inogara ichiita. Kufanana nechiteshi chese chekushambadzira, kutumira mameseji kunofanirwa kugara kuchigadziridzwa zvichienderana nedata raunotora mukutaura. Kutora nzira yenguva dzose inoyera kutumira mameseji pamapuratifomu anogonesa iwe kugadzira iyo yakanyanya kukosha munguva refu. Sei? Iwe uri kuvaka vateereri vanosvikika zvakananga pamatanho ekutumira mameseji aunogona kuita zvakare kuti uwedzere kukosha kwehupenyu hwemutengi. Iwe zvakare urikugonesa yako yekukurukurirana AI zvichibva pane iyo meseji data yaunotora kubva kune vatengi.
Chidzidzo 5: Shandisa Declared Data yeNani Engageage
Yakaziviswa data yakaunganidzwa kubva mukudyidzana kwevatengi, pamwe neadhisheni yedhata uye analytics webhusaiti, inogona kubatsira kune yako yese kushambadzira kuedza. Inogona kukubatsira kuti unzwisise zviri nani vateereri vako uye zvavanoda asi inogona kukubatsira iwe kugovera vateereri vako zviri nani, uye kugadzirisa iwe kuti unovaita sei zvakare pamatanho ekutumira mameseji.
Nei zvichikosha? Yedu data inoratidza kuti mhando dzinoshandisa yakaziviswa data yakaunganidzwa mukukurukurirana vanokwanisawo kugadzira zvikamu zvakanangwa zvakanyanya kuti zvibatane zvakare pamatanho ekutumira mameseji, zvichikonzera shanduko yakasimba. Hyper personalized re-kubatanidzwa zviziviso pane maapplication akaita seMessenger tora 80% yakavhurika mitengo uye 35% clickthrough mitengo paavhareji. Izvo zvakakura zvichienzaniswa nechiteshi senge email, yagara ichifungidzirwa seyakanyanya kuita chiteshi chekuchengetedza. Uyezve, 78% yevatengi vanoti vangangotenga imwe kutenga kubva kumutengesi kana kupa kwavo kwakanangana nezvavanofarira uye zvavanoda.
Kutumira meseji iRamangwana reKushambadzira
Nzira iri nani yekushambadzira yekukurukurirana ndeye otomatiki imwe-kune-imwe meseji pamaapplication ayo vatengi vako vanopedza nguva yavo. Ndizvo zvichakubvumidza kuti uve mimhanzi muhupenyu hwemutengi wako, kwete chikamu cheiyo static yemamwe mabhureki kumashure.
Dhawunirodha Spectrm's State of Social Conversational Commerce Report
Tags: aimameseji otomatikizvakanakisisa zviitoBotchat bot maitiro akanakisachat engagementchatbot kubatanidzwachatbotskushambadzira kwekukurukuriranahurukuro yekushambadzira nzirakukurukuriranakutendeukakudyidzana kwevatengiyakaziviswa dataemojiEmoticonszvidzidzo zvinodzidzwamachine learningmailkutumira mamesejimameseji maapplicationzvakavanzikaPepururipotispectrmmamiriro ekutengeserana kwekukurukuriranatlekom